Kubada Cagta: Soo bandhigida Koobka Koobka Adduunka ee Yaoundé - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Kubada Cagta: Soo bandhiga Koobka Koobka Aduunka ee Yaoundé
Kubadda Cagta Haweenka: bandhigida Koobka Koobka Aduunka ee Yaoundé
Koobka Aduunka ee Koobka Aduunka ayaa timid Isniintii, wax ka badan hal bil kadib markii ay bilaabatay tartanka waddamada u qalma tartankaas.
Dhowr dhacdooyin ayaa lagu qorsheynayaa Yaoundé Talaadada si loogu calaamadiyo marxaladda Koobka Aduunka ee Koobka Adduunka ee France 2019, Cameroon. Marka labaad ee nooca 2015 ka dib. Waxaa soo bandhigi doona weeraryahanka Gaëlle Enganamouit, oo uu u magacaabay Xiriirka Caalamiga ah ee Xiriirka Kubadda Cagta (Fifa).
Cameroon ayaa ku guuleysatay Koobkii Adduunka ee Koobka Adduunka ee lagu qabtay Faransiiska laga bilaabo 7 Juun ilaa 7 bisha July. Nayjeeriya iyo Koonfur Afrika ayaa sidoo kale uqalmaamaya aagga Afrika.
Koobka waxaa loo soo bandhigi doonaa Wasiirka Isboortiga iyo Waxbarashada Jimicsiga Talaadada. Ka dib booqashada booqashada Ra'iisul Wasaaraha iyo shir saxaafadeed. Ciyaartoyda aan caqli-gal ahayn waxay joojin doonaan wax-qabadyada iyadoo loo marayo cayaaraha carwada garoonka kubadda cagta ee Yaoundé. Kooxda qaranka ayaa la kulmi doonta FAP Amasons.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/09/football-feminin-presentation-du-trophee-de-la-coupe-du-monde-a-yaounde/
Bilayska ayaa hela bam gacmeed oo taageera ADO taageerayaasha HQ ee The Hague
CAN 2019: Benin ee Masar oo aan lahayn OEM?